ကမ္ဘာ မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးရင် မြန်မာပြည် မှာပဲ မိသားစု နဲ့ ခြေချ နေထိုင်မှာပါလို့ ပြောလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန် – Askstyle
ကမ္ဘာ မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးရင် မြန်မာပြည် မှာပဲ မိသားစု နဲ့ ခြေချ နေထိုင်မှာပါလို့ ပြောလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ဟဲဗီး ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ဘရန္ဒန္ဗီရာ ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွာ လက္ခံ ထိုးသတ္ အႏိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေအာင္လအန္ဆန္ဟာ မိသားစုနဲ႔ အတူ အနားယူေနခဲ့ပါတယ္…လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္လအန္ဆန္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္….
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ ကို ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္းေတြ အနာဂတ္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးတစ္ဖိုင္ ပရိသတ္ၾကားမွာ ၾကည့္ရႈမႈမ်ားေနတာေတြ႕ရပါတယ္…
ဗရန္ဒီရာ နဲ႔ ထိုးသတ္ အၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္လည္း လက္မွာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါတယ္…အဲဒီ ဒဏ္ရာဟာ အ႐ိုးလြဲသြားတာျဖစ္ၿပီး ပင္အပ္ ၂ ေခ်ာင္းထည့္ထားရတယ္လို႔ ေအာင္လအန္ဆန္က ဆိုပါတယ္… အဲဒီေနာက္ သူ႔ပြဲေတြ ၾကည့္ရႈအားေပးရင္း အသက္ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြ သတင္းၾကားရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းလည္း ေျပာျပသြား ပါေသးတယ္….
ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ၃ ပြဲ ၄ ပြဲေလာက္ ကစားခ်င္ေသးေၾကာင္း ဆိုပါတယ္…က်န္းမာၿပီး ကစားႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ ကမာၻမွာ အေကာင္းဆုံး မစ္ဒယ္ဝိတ္ကစားသမားျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး မိမိတတ္ထားတဲ့ပညာေတြ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးရင္း ျမန္မာျပည္မွာ မိသားစုနဲ႔ ျပန္ၿပီး အေျခခ်မယ္လို႔ ေအာင္လအန္ဆန္က ဆိုသြား ပါတယ္….
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ ဟာ ျမစ္ႀကီးနားကို သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္…ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဗီဒီယိုေလးထဲမွာေတာ့ ေအာင္လအန္ဆန္ေျပာခဲ့တာေလးေတြကို အျပည့္အစုံၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ေနာ္….
ဟဲဗီး ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီရာ ရဲ့ စိန်ခေါ်မှု ကို ဂျပန်နိုင်ငံ မှာ လက်ခံ ထိုးသတ် အနိုင်ပြီးတဲ့နောက် အောင်လအန်ဆန်ဟာ မိသားစုနဲ့ အတူ အနားယူနေခဲ့ပါတယ်…လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ကို ပြိုင်ပွဲအကြောင်းတွေ အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင် ပရိသတ်ကြားမှာ ကြည့်ရှုမှုများနေတာတွေ့ရပါတယ်…
ဗရန်ဒီရာ နဲ့ ထိုးသတ် အပြီး အောင်လအန်ဆန်လည်း လက်မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်…အဲဒီ ဒဏ်ရာဟာ အရိုးလွဲသွားတာဖြစ်ပြီး ပင်အပ် ၂ ချောင်းထည့်ထားရတယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်က ဆိုပါတယ်… အဲဒီနောက် သူ့ပွဲတွေ ကြည့်ရှုအားပေးရင်း အသက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ သတင်းကြားရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းလည်း ပြောပြသွား ပါသေးတယ်….
ဒါ့အပြင် လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ၃ ပွဲ ၄ ပွဲလောက် ကစားချင်သေးကြောင်း ဆိုပါတယ်…ကျန်းမာပြီး ကစားနိုင်သေးတာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး မစ်ဒယ်ဝိတ်ကစားသမားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး မိမိတတ်ထားတဲ့ပညာတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးရင်း မြန်မာပြည်မှာ မိသားစုနဲ့ ပြန်ပြီး အခြေချမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်က ဆိုသွား ပါတယ်….
မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ဟာ မြစ်ကြီးနားကို သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ အောင်လအန်ဆန်ပြောခဲ့တာလေးတွေကို အပြည့်အစုံကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်….